justfreeman: juni 2011
လင်းသန့်Thursday,30 June 2011 17:20 .
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်မိသားစုခရီစဉ်အဖြစ်သားဖြစ်သူ ကိုထိန်လင်းနှင့်အတူမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းပုဂံဒေသသို့ဘုရားဖူး သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယင်းခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏လုံခြုံရေးကိစ္စများတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည်ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းထိန်ကို မေးမြန်းရာခရီးစဉ်မှန်ကန်ကြောင်းပြောဆိုအတည်ပြုသော်လည်းအသေးစိပ်ပြောဆိုရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်အပါအ၀င်မန္တလေးမြို့နှင့်ပြင်ဦးလွင်မြို့များတွင်တချိန်တည်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားစေခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်ယခုကဲ့သို့ရန်ကုန်ပြင်ပခရီးထွက်မည့်အပေါ်အစိုးရသတင်းစာ တစောင်တွင်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထားသည့်စကားရပ်များဖော်ပြထားသည်။ထို့အပြင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကလည်းအကြောင်းကြားစာပို့ထားသည်များကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်NLD အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေကြသည်။
ယမန်နေ့ထုတ်အစိုးရကြေးမုံသတင်းစာတွင်ဆောင်းပါးရှင်ပြည့်စုံအောင်၏“ရွေးချယ်ခွင့်က လက်ထဲမှာ”ဆောင်းပါးတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မကြာခင်နယ်ခရီးထွက်မည်ဆိုသည့်အပေါ်“မည်သို့ ပင်ဆိုစေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နယ်ထွက်လာလျှင်မြောက်မြားလှစွာသောယခင့်ယခင် သာဓကများနည်းတူရုတ်ရုတ်သဲသဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေဖြစ်လာမှာကိုကျနော်တို့စိုးရိမ်မိသည်။ စိုးရိမ်လောက်စရာ အကြောင်းတွေလည်း အခိုင်အမာပင်ရှိနေသည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ဇွန်လ၂၈ရက်နေ့စွဲဖြင့်ဥက္ကဌဦးအောင်ရွှေနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ထံ ပေးပို့လာသောစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး(NLD)အားအင်အားသုံးဖျက်သိမ်းလာမည်ကိုအထူးစိုးရိမ်သော်လည်း ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း NLD ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သည့် ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“သူတို့လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့စိုးရိမ်တာပေါ့။သတင်းစာတို့ဘာတို့ကခြိမ်းခြောက်တယ်၊ပုတ်ခတ် တယ်ဆိုတာကကြုံနေကြဆိုတော့သိပ်မထူးလှဘူး။အခုဟာက၀န်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်လုပ်တာဆိုတော့ တော်တော်စိုးရ်ိမ်ပူပန်တာပေါ့”ဟု ဦးဝင်းတင်ကပြောပြသည်။
ယခုကိစ္စသည်အချိန်ကိုက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီစဉ်ထားသည့်မကြာခင်သွားမည့် နယ်ခရီးစဉ်နှင့်လည်းတိုက်ဆိုင်နေကြောင်း၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်NLDပါတီအပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီအရေးထောက်ခံကြသူများ၊တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုပါခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ကြောင်း၎င်းက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
“ဒီဖြစ်ရပ်နောက်ကွယ်မှာအခုအစိုးရထဲမှာသဘောထားတင်းမာသူနဲ့ပျော့ပြောင်းသူတွေကြားမှာအားပြိုင်နေတယ်လို့ တထစ်ချသုံးသပ်တယ်။သူတို့ဘက်ကအဖြစ်နိုင်ဆုံးလုပ်နိုင်တာတွေကပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းမယ်။နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ချမယ်။ထောင်ချမယ်။ပါတီရုံးတွေပိတ်ပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းမယ်။ဒါမျိုးတွေပဲသူတို့လုပ်နိုင်တာ။ပြင်ဆင်လည်း ဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူး”ဟုဦးဝင်းတင်က ဆိုသည်။
NLDသည်တရားဝင်ပါတီမဟုတ်ကြောင်းနှင့်NLDလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေမှုများသည်တရားဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်နေကြောင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအကြောင်းကြားစာကိုအစိုးရအရာရှိတဦးကိုယ်တိုင် လာရောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်NLDပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်မှတ်ဖြင့်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုထံ လိပ်မူပြီးNLDသည် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် တရားဝင်ရပ်တည် နေကြောင်းနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ဆွေးနွေးလိုကြောင်းဇွန်လ၂၉ရက်နေ့စွဲဖြင့်အကြောင်းပြန်စာကိုသက်ဆိုင်ရာသို့NLDကလူကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပေးပို့ခဲ့သည်။
“သို့ပါ၍အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတူညီသောလိုလားချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ညှိနှိုင်းလိုပါသဖြင့်စီစဉ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်”ဟု ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးထံ ပေးပို့တုံ့ပြန်သော ယမန်နေ့ကစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
NLDအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအမှတ်-၄/၈၈အရ၁၉၈၈ခုနှစ်ကတရား င်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးပြဌာန်းချက်များကိုလည်းချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြေင်း၊၂၀၁၀ပြည့်နှစ်မတ်လ၈ရက်နေ့ထုတ် ဥပဒေအမှန်-၂/၂၀၁၀အရလည်း ရက်ပေါင်း ၆၀အတွင်းကော်မရှင်သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသဖြင့် ဥပဒေအရပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)ပုဒ်မ-၄၄၆ အရလည်းNLDသည်တရားဝင်ခြင်းမှပယ်ဖျက်နိုင်သည့်အခွင့်အာဏာမရှိသည့်အတွက် တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း၊ နေပြည်တော် တရားရုံးချုပ်၏ ပါတီအား ဖျက် သိမ်းလိုက်ခြင်းသည် တရားမ၀င်ကြောင်း NLD ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ကြောင့် NLD အနေနှင့် ထပ်မံ မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်း ထောက်ပြထားသည်။
Posted by justfreeman at 17:060comments
သန်းထိုက်ဦး Thursday, 30 June 2011 13:14
ယင်းဆွေးနွေးပွဲ၌အစိုးရဘက်မှကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးသန်းအောင်ဦးဆောင်၍ ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဦးခက်ထိန်နန်အပါအ၀င်၃ဦးလာရောက်ကြောင်း၊KIOက ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂွမ်မော်ဦးဆောင်ပြီး၆ဦးတွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။
ယခုဆွေးနွေးပွဲသည်ပဏာမဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ဖြစ်သည်ဟုဗိုလ်မှူးချုပ်ဂွမ်မော်၏ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။မည်သည့်နေ့ရက်၌ထပ်မံဆွေးနွေးမည်ကိုမသိရသေးဘဲအစိုးရဘက်က အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်KIOထိန်းချုပ်ဒေသလဂျားယန်နှင့်အစိုးရတပ်နယ်မြေအကြားတွေ့ဆုံ၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းKIOတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးလနန်ကဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်၁၇ရက်နေ့ကKIOကိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပြုလုပ်ရန်အစိုးရကကချင်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်သည်။
အစိုးရကကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိတာပိန်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအနီးရှိ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)တပ်များအားလုံခြုံရေးအရစိတ်မချရဟုအကြောင်းပြကာထွက်ခွာရန် ပြောဆိုခဲ့ပြီးဇွန်၉ရက်နေ့ကစတင်၍တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ကြသည်။ယင်းတိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံ ထောင်နှင့်ချီ၍ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရ သည်။
ယခင်စစ်အစိုးရနှင့်KIOသည်၁၉၉၄ခုနှစ်ကစတ၍အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းကအစိုးရသတင်းစာများ၌KIAကို“သောင်းကျန်းသူ”ဟုပြန်လည်သုံးနှုန်းခဲ့ ပြီးနောက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလည်း ပျက်ပြယ်ခဲ့သည်။
ခင်ဦးသာ Thursday, 30 June 2011 17:50 .
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သောအစိုးရသစ်အဖွဲ့တာဝန်ယူပြီးရက်၉၀ပြည့်မြောက်ချိန်တွင်ကျင်းပသော ပြည်နယ်၊တိုင်းလွှတ်တော်များ၏အထူးအစည်းအဝေးများအပြီး၎င်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဆိုရင်စီးပွားရေးဌာနကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဌာနလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအကုန်လုံးကိုနေပြည်တော်က တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်တော့မယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပါပြီ”ဟုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)၏ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာညိုညိုသင်းကဧရာဝတီကို ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာရန်ကုန်တိုင်းတွင်ပထမပိုင်း၌ပါရှိခဲ့သော်လည်းယခုမပါရှိတော့ပေ။ ရန်ကုန်တိုင်းရှိဝန်ကြီးဌာန၉ခုမှာလုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ၊စည်ပင်သာယာရေး၊ဘဏ္ဍာအခွန်၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး၊စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှု၊လူမှုရေး ၀န်ကြီးဌာန၊သစ်တောနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအရပြည်နယ်၊တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့များပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်တချို့ရခဲ့သော်လည်း ထိရောက်သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိ၍ဗဟိုမှချုပ်ကိုင်သည့်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကဆိုသည်။
ဇွန်လ၂၉ရက်နေ့တွင်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ကချင်ပြည်နယ်၏၀န်ကြီးဌာန အပြောင်းအလဲနှင့်ဝန်ကြီးအသစ်ခန့်အပ်ခြင်းကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်၏အမိန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ်အစိုးရ သတင်းစာများ၌ ရေးသားထားသည်။
“အရင်လိုပဲဝန်ကြီးဌာန၉ခုရှိပေမယ့်စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုင်ထားတဲ့နယ်စပ်ရေးရာလိုဌာနပဲ မပြောင်းလဲတာပါ။အစည်းအဝေးက၇မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်”ဟုရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP)၏ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မြကျော်က ပြောသည်။
၀န်ကြီးဌာနအပြောင်းအလဲလုပ်ခြင်းသည်အရာအားလုံးနီးပါးကိုဗဟိုမှပြန်လည်ချုပ်ကိုင်ထားလိုသည့် သဘောကြောင့်ဟုထင်မြင်ကြောင်း၊လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အားနည်းခြင်းရှိသကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတချို့လည်းရှိကြောင်းကိုယ်စားလှယ်များက ဆိုသည်။
“ရန်ကုန်အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာတော့အပြောင်းအလဲတချို့တွေ့ရပါတယ်။ဥပမာ-စည်ပင်ဝန်ကြီးဆိုရင် အမှိုက်သိမ်းတာတွေ၊မြောင်းဖောက်တာတွေပိုလုပ်လာတယ်။မြို့တော်ခန်းမကြီးလည်းပြန်ပြီးတော့ ဆေးသုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်” ဟုဒေါက်တာညိုညိုသင်းကပြောသည်။
“အရင်လူတွေလုပ်ခဲ့တာကိုဆက်ပြီးသွားနေတဲ့သဘောပါ။လက်ရှိဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ ပြောင်းလဲလာတာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူး။ဗဟိုကချုပ်ကိုင်ထားပြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းပဲပြည်နယ်၊တိုင်း အစိုးရတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးမထားတော့သိပ်ပြီးတော့လုပ်ရဲကိုင်ရဲတဲ့သတ္တိတွေမရှိကြဘူး”ဟု မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ၏ဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်ငွေသိန်းကဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ပြည်နယ်၊တိုင်းအစိုးရများအနေဖြင့်ဗဟိုမှလမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းကိုစောင့်နေရန်မလိုဘဲလုပ်ဆောင်စရာ ရှိသည်ကိုတာဝန်ယူမှုရှိရှိဖြင့်လုပ်ဆောင်သွားရန်တာဝန်အပြည့်ပေးအပ်သည်ဟုသမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြည်နယ်၊တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဧပြီလအတွင်းတွေ့ဆုံရာ၌ ပြောဆိုခဲ့သည်။
“အထက်ကအမိန့်ပေးစနစ်နဲ့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊အောက်ခြေကတာဝန်ယူမှုရှိပြီးအောက်ကအပေါ်ကို လာတဲ့စနစ်နဲ့သွားကြဖို့၊ရဲရဲဝံ့ဝံ့တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်”ဟုဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ်ပေါက်လာသောလက်ရှိအစိုးရကျင့်သုံးနေသည့်စနစ်သည်ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစနစ်မဟုတ်သည့်အတွက်ပြည်နယ်၊တိုင်းအစိုးရ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အားဗဟိုမှ ပြန်လည်ချုပ်ကိုင်ခြင်းမှာအထူးအဆန်းမဟုတ်ဟုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPP)၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က ဆိုသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်သောပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ)မှသမ္မတဖြစ်လာ၍ပြည်နယ်၊တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်း၎င်းစိတ်ကြိုက်ခန့်ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဦးအေးသာအောင်က ဆက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၌၀န်ကြီးဌာန၉နေရာတွင်ကြံ့ဖွံ့ပါတီက၀န်ကြီးဌာန၈နေရာ ရရှိထားပြီး တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ(တစည)က၁နေရာရရှိထားကြောင်း ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ဆိုသည်။
မျိုးသန့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၉ မိနစ် .
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် တရားဝင် ရပ်တည်နေသော နိုင်ငံရေးပါတီ တခုဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်နှင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်လိုခြင်းမရှိကြောင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပါတီလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍သတိပေးချက်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်သည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုသို့လိပ်မူ၍ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးပို့သောစာမိတ္တူကိုမဇ္ဈိမကလက်ခံရရှိထားရာအန်အယ်ဒီသည်ဥပဒေအရပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိဟုပြန်လည် ငြင်းချက်ထုတ်မှု ပါရှိသည်။
၂ဝ၁ဝရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုသည့်အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှအလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သည် ဆိုသော အစိုးရ၏ စောဒကကို ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ကိုပင် ကိုးကား၍ ပြန်လည် ချေပလိုက်သည်။
“ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လိုအပ်သောဥပဒေများကို ပြဋ္ဌာန်းရမည်”ဟုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၄ဝ၉ တွင်ပါရှိသောကြောင့် အဖွဲ့ချုပ်သည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိပါ ”ဟု အန်အယ်ဒီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များအရေးပေါ် အစည်းအဝေးထိုင်ကာ ပေးပို့သော စာတွင်ပါရှိသည်။
“ဥပဒေတွေကပြောရရင်အများကြီးဗျအဲဒီတော့ခြုံပြီးတော့ပြောရရင် NLD ဟာ ပျက်မသွားဘူးလို့ ကျနော်တို့ ဥပဒေအရ အဲဒီလိုမြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ချိတ်တာ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်း NLD အနေနဲ့ပဲ လှုပ်ရှားနေတာပါ”ဟု အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် တဦး ဖြစ်သော ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
ဇူလိုင်၂၂ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နယ်လှည့်ခရီးစဉ်မတိုင်မီ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရေးပါတီအနေဖြင့် လှုပ်ရှားမှု မလုပ်ရန် အစိုးရအာဘော် သတင်းစာများမှ တဆင့် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် တုံ့ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော် အဆင့်ဆင့်နှင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရကိုလည်း ဆန့်ကျင်လိုသည့် သဘောထား မဟုတ်ပါ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အလေးထားလိုက်နာခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်”ဟု အန်အယ်ဒီ၏ပေးစာထဲတွင်ဖေါ်ပြထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကပါတီအဖြစ်မှဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတရားမဝင်ကြောင်းတရားရုံးချုပ်(ရန်ကုန်)သို့ လျှောက်ထားခဲ့မှုကို ရည်ညွှန်းထားသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာရေးစီစဉ်ပေးရန် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို ကိုမေတ္တာရပ်ခံကြောင်းလည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတွက် သဘောထား ဖလှယ်လိုက်ရင် ဒါတွေက ပြေလည်နိုင်စရာတွေ ချည်းပဲလို့ ကျနော်တို့မြင်တယ် ဒါ့ကြောင့်ကျနော်တို့စာမှာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံတယ်”ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
Posted by justfreeman at 15:250comments
Posted by justfreeman at 15:280comments
Posted by justfreeman at 14:300comments
Posted by justfreeman at 14:140comments
Posted by justfreeman at 15:040comments
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၁၈ မိနစ် .
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်အရာရှိများမြန်မာနိုင်ငံသို့ယခုတလောလာရောက်ကြသကဲ့သို့ သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာKevinRuddလည်းကြာသပတေးနေ့တွင်မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိမည်။
မစ္စတာRuddသည်ဇွန်၃ဝရက်မှဇူလိုင်၂ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်မည်ဖြစ်ကာ၊အစိုးရ အရာရှိများ၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အတိုက်အခံများနှင့်နေပြည်တော်နှင့်ရန်ကုန်မြို့၌တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင်အရေးကြီးသောအခြေအနေတခုဖြစ်ပွားနေစဉ်ယခုခရီးစဉ်ပေါ်ပေါက်လာပြီး သြစတြေးလျအစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမည်ကဲ့သို့ အကောင်းဆုံးကူညီနိုင်မည်ကိုအကဲခတ်လေ့လာရန်အခွင့်ရရှိလာစေမည်”ဟု သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးရုံး၏ ကြေညာချက်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ KevinRudd (Photo: Australian government)
မစ္စတာRudd၏သဝဏ်လွှာထဲတွင်“မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းပြောကြားရန်မိမိအနေနှင့် ယခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို အသုံးချသွားမည်” ဟု ဆိုထားသည်။
၎င်းလာရောက်ခြင်းမပြုမီဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊အမေရိကန်မှအဆင့်မြင့်သံတမန်များ၊ တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယမှကိုယ်စားလှယ်များမြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့ကြသေးသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်အစောပိုင်း လွှတ်တော်ခေါ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံခြားအစိုးရ များက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အပြောင်းအလဲများ ရှိမရှိ လေ့လာစူးစမ်းရန် စိတ်အားထက်သန်နေခြင်းဖြစ်သည်။
၂ဝဝ၈မေလတွင်မြန်မာနိုင်ငံကိုနာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတပတ်ခန့်အကြာတွင်မစ္စတာRudd ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအပြင်းအထန် ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ရာ၌“အခုလိုအချိန်မှာလက်တွေ့ကျကျနဲ့ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်သင့်တာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံခါးတွေကိုရိုက်ချိုးဖွင့်ပြီးတော့အကူအညီအရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ လူထုကို အကူအညီပေးဖို့ပါပဲ” ဟု ဆိုခဲ့သည်။
သို့ရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်၂ဝ၁ဝနိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလကမူမစ္စတာ Ruddက“သြစတြေးလျအနေနဲ့ရည်ရွယ်ထားတာကအဲဒီရွေးကောက်ပွဲကနေဘယ်လိုရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တွေဘာပြောကြမလဲဆိုတာကိုသေချာနားထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အခုထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာရဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမှာပါ”ဟုသြစတြေးလျ အသံလွှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းသို့ သံတမန်ဆန်စွာ ပြောဆိုခဲ့သေးသည်။
၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင်သြစတြေးလျကမြန်မာနိုင်ငံသို့နိုင်ငံခြားအထောက်အပံ့အဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၅ဝခန့်ကူညီလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝခုနှစ်တွင်ကူညီခဲ့သောပမာဏဒေါ်လာ၂၉ သန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် များပြားလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုခရီးစဉ်သည်သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနှင့်၂ဝဝ၂ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံး လာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်တနှစ်အကြာ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီပဲယင်းအရေးကိစ္စ ဖြစ်ခဲ့ပြီး
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခံရကာ၂ဝ၁ဝ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်မှ ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့မလာခင်မစ္စတာRuddသည်အာဖရိကသမဂ္ဂအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် အက်ကွက်တိုးရီးယယ်ဂီနီ နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက်‘Freedom House’ ၏ အဆိုအရ အက်ကွက်တိုးရီးယယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေသည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by justfreeman at 14:410comments
ထွန်းထွန်း တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၃ မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ရေခမ်းခြောက်ကာရေအဆိပ်သင့်နေသည့်ရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးကန်အတွင်း ကျေးရွာ၊နေအိမ်နှင့်ကျွန်းမျောများထပ်မံမဆောက်လုပ်ရန်အပါအဝင်၁ဝချက်အားဒုသမ္မတဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းကတနင်္ဂနွေနေ့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတရပ်တွင် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ပြည်ထောင်စုသစ်တောရေးရာနှင့်လယ်ယာ/ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးများ၊မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သူက“အင်းလေးကန်တွင်နောက်ထပ်ကျေးရွာ၊အိမ်၊ကျွန်းမျောများတိုးချဲ့ တည်ဆောက်မှုမပြုရန်၊မလိုအပ်သောကျွန်းမျော၊ဒိုက်၊မှော်၊နုန်းမြေများကိုဆယ်ယူဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန်နှင့် ချောင်းများရေစီးရေလာကောင်းအောင်ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရန်”ဟုဆိုသည်။
ဒုသမ္မတတိုက်တွန်းချက်အတိုင်းပြုလုပ်ပါကဒေသခံများနေထိုင်ရေးခက်ခဲလာနိုင်သဖြင့်အစိုးရက စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်မှသာလုပ်ငန်းအောင်မြင်မည်ဟုရန်ကုန်ရှိသစ်တောသယံဇာတ၊ပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးအသင်းFREDAမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် ဦးအုန်းက အကြံပြုသည်။
“လူတွေရဲ့နေမှုထိုင်မှုကတော့အရေးကြီးတယ်။ဒေသခံတွေကတသက်လုံးမိရိုးဖလာသားစဉ်မြေးဆက်ဒီနေရာမှာနေပြီး ဒီနေရာမှာရှင်လာကြတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးလည်းဒါဦးစားပေးရမှာ။ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က အမြဲတမ်းလွန်ဆွဲနေတာ။အဲဒါအမြဲတမ်းဝိရောဓိဖြစ်နေတော့ဒီပြဿနာတွေကိုလိမ်လိမ်မာမာနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စေတနာထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတော့အောင်မြင်သွားမှာပါ”ဟုသူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အင်းလေးဒေသအခြေစိုက်အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကလည်း“ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေပေါ့လေ။နောက်အသေးစားအိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းလေးတွေ၊အဲဒါလေးတွေကိုလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကလည်းကုန်းပေါ်ကို ရောက်သွားပြီးတော့မှလူနေမှုကလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်။အင်းလေးကန်ကိုလည်းအညစ်အကြေးတွေ မရှိတော့ဘူး။အားလုံးကအလုပ်အကိုင်တွေရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစား လက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေတော့ ထူထောင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အင်းလေးကန်သည်မူလကရေပြင်ဧရိယာ၁ဝဝစတုရန်းမိုင်အထိရှိခဲ့ရာမှ၂ဝဝ၈ခုနှစ်တွင်၂၃မိုင်ခန့်သာရှိတော့ကာ၂ဝ၁ဝခုနှစ်ထဲတွင်စံချိန်တင်ရေခမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ကန်သည်နွေရာသီတွင်ပျမ်းမျှ ရေအနက်၇ပေခန့်ရှိပြီးအနက်ဆုံးအပိုင်းမှာ၁၂ပေခန့်ရှိကာမိုးရာသီတွင်မူပျမ်းမျှထက်၅ပေခန့် မြင့်တက်လေ့ရှိသည်။
ဒုသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၏ဆွေးနွေးချက်ထဲတွင်ကန်အတွင်းရေဝင်ရေထွက်နည်းလာခြင်းနှင့်နုန်းကျခြင်းများရှိနေရာ၊ ရေဝေရေလဲဒေသရှိသစ်တာသစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်နုန်းတားဆည်များတည်ဆောက်ရန်ကိုပါ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ် အင်းလေးကန်တွင်းရှိ ခရမ်းချဉ်သီးပင်များကို ပိုးသတ်ဆေး ပက်ဖျန်းနေသူတဦး ပိုးသတ်ဆေး သုံးစွဲမှုကြောင့် ကန်ထဲရှိ ရေသတ္တဝါများ အတွက် အဆိပ်သင့်မှုများ ရှိသည်။ ဓာတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ။
ထို့အပြင်ဒေသခံများအတွက်သောက်သုံးရေရင်းမြစ်များရှာဖွေတည်ဆောက်ရန်၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကိုအမျိုးသားရေးလိုအပ်ချက်အဖြစ်ပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အပြင်ဘဏ္ဍာငွေဖောင်ဒေးရှင်း တရပ်အားနိုင်ငံတော်မှမတည်၍လုပ်ငန်းရှင်များထည့်ဝင်ငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားရန်တိုက်တွန်းထားသေးသည်။
အင်းလေးကန်မှာမြန်မာနိုင်ငံ၏သဘာဝအမွေအနှစ်တခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားခရီးသွားများမျက်စိကျသည့်ဒေသလည်း ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းASEANကအာဆီယံ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာဖြစ်သည်။
အင်းလေးကန်ကိုနဂိုမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်ရန်အတွက်၁ဝနှစ်ထက်မနည်းအချိန်ယူလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကာ၊ တားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းအပြင်တိကျသည့်ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းရန်လိုအပ်သေးသည်ဟုဦးအုန်းက ပြောဆိုသည်။
သူကဆက်ပြီး“ဥပဒေတွေကလည်း မလုံလောက်ဘူး။ဥပမာဆိုပါတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ EnvironmentalLawကအခုထက်ထိမထွက်သေးဘူး။နောက်တခုအရေးကြီးတာကအင်းလေးနဲ့လည်း ဆိုင်တာကBiodiversityLaw။ဆိုလိုတာကအဆိပ်အတောက်ရှိတဲ့ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာတွေအစားသဘာဝ ဓာတ်မြေသြဇာအစားထိုးတဲ့ စနစ်။ ဒါကလုပ်တာကတပိုင်း၊ဥပဒေကလည်း ပြုရမယ်” ဟု ပြောသည်။
အင်းလေကန်အတွင်းကျွန်းမျောစိုက်ခင်းများတွင်ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာများအသုံးပြုနေသဖြင့် ရေညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်နေပြီး ကန်အတွင်း ကျွန်းမျော စိုက်ခင်းပေါင်း ဧက ၈ဝဝဝ ခန့် ရှိသည်ဟု ဦးဝင်းမြင့် အဆိုအရ သိရသည်။
ဖြစ်လောက်တဲ့အထိမဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါလေးကိုကျနော်တို့ကမထိန်းသိမ်းလို့ရှိရင်နောက်၅နှစ်မှာလူကို အန္တရာယ်ဖြစ်လာမယ့် အနေအထား ရှိပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
အင်းလေးကန်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မြန်မာအစိုးရကကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်းဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံအနေဖြင့်ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်မှသာ အောင်မြင်နိုင်မည် ဟုလည်း ဦးအုန်းက ပြောဆိုလိုက်သည်။
ခင်ဦးသာ Saturday, 25 June 2011 13:10
.ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ဖြူမြို့၌တည်ဆောက်နေသောကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ် လုပ်ငန်းခွင်များမှထွက်သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားလူနေကျေးရွာအနီး၌စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးယူမှုမရှိဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့ကံ့ကော်တောဘုရားအနီးတည်ဆောက်နေသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်ရုံစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များ၌ကိုရီးယား၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်စသည့်နိုင်ငံသားတရာကျော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှကုမ္ပဏီတချို့၏၀န်ထမ်းများနေထိုင်လုပ်ကိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“အဲဒီလူတရာကျော်ရဲ့စားကြွင်းစားကျန်တွေ၊အဲဒီလူတွေသုံးတဲ့အိမ်သာကမိလ္လာတွေ၊အသုံးအဆောင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ကံ့ကော်တောဘုရားနဲ့နီးစပ်နေတဲ့အုန်းတောနဲ့ဂုံးချိန်ရွာနားကချောင်းထဲကို နေ့တိုင်းလာစွန့်ပစ်နေတယ်”ဟု အုန်းတောရွာသားတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အဆိုပါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှထွက်သောအနံ့ဆိုးများကြောင့်ရွာသားများသည်နေထိုင်မရအောင်ပင်ကြုံနေကြရကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်မိုးရွာသောနေ့များတွင်ပိုမိုဆိုးရွားကြောင်း၊ထို့ကြောင့်အုန်းတောရွာသားတရာဝန်းကျင်နှင့်ဒေသခံများ၊ဒေသခံသံဃာတော်များကစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုး၍မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံ ဇွန်လ၁၄ရက်နေ့တွင်တိုင်ကြားသော်လည်း၎င်းတို့၌ပြောဆိုဟန့်တားပိုင်ခွင့်မရှိဟု ပြန်လည်ပြောဆိုကြောင်း ဒေသခံများက ပြောပြသည်။
“တိုင်စာတွေတော့ရထားပြီးပါပြီ၊ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့တော့ အရေးယူမှုလုပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး၊နေပြည်တော်ကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာလည်းပဲဒီကိစ္စကိုပြောထားပါတယ်”ဟုရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP)၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကျောက်ဖြူမြို့ခံ ဦးဘရှင်က ပြော သည်။
ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောလုပ်ငန်းခွင်များတွင်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ပြည်တွင်း၊ပြည်ပနိုင်ငံသားများ၊အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ ဒေသခံပြည်သူလူထုအား ထိခိုက်နစ်နာ စေ မည့် ကိစ္စများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးကို အလေးထားလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးဘရှင်က ဆိုသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့အနီးရှိမဒေးကျွန်းပေါ်မှတရုတ်နိုင်ငံသို့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမည့် မဒေးကျွန်းအနီးရှိပင်လယ်ပြင်၌တည်ရှိသောကျောက်ဆောင်၊ကျောက်တန်းအများအပြားကိုလည်း ဒိုင်းနမိုက်ကိရိယာများအသုံးပြုကာဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခဲ့မှုများကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ခဲ့သည့်အပြင် ရေနေသတ္တ၀ါအများအပြားကို သေဆုံးစေခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိသေးကြောင်း၊တာဝန်ရှိသူများ၏ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစာရွက်စာတမ်းများ၌ရေးသားထားချက်များသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း လက်တွေ့လိုက်နာမှု အားနည်းသေးကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်း သိမ်းရေး ပညာရှင် ဦးအုန်းက ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောလုပ်ငန်းခွင်များ၌တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သောတရုတ်အမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်း(ChinaNationalPetroleum Corporation-CNPC)ကုမ္ပဏီကဦးဆောင်ကာ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလမှစ၍အကောင်ထည်ဖော် တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်အပြီးတည်ဆောက်မည်ဟုအစိုးရသတင်းစာများ၌ ရေးသားခဲ့သည်။
ထိုစီမံကိန်းများပြီးစီးပါကကျောက်ဖြူမြို့မှတရုတ်နိုင်သို့တနှစ်လျှင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တန်ချိန်ကုဗမီတာ၁၂ ဘီလီယံနှင့် ရေနံစိမ်း စည် ၄၀၀၀၀၀ ခန့် တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
CNPCကုမ္ပဏီအပြင်PSCကုမ္ပဏီ၊MNG၊HyundiaMyintandAssociate၊ဒေ၀ူး၊ မြန်မာ့ ရွှေသရဖူ၊ အေးရှားဝေါလ်စသည့်ပြည်တွင်း၊ပြည်ပကုမ္ပဏီများကလုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တာဝန်ခံ ကိုဝင်းအောင် က ပြောသည်။
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်များ၌လည်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊လုပ်အားခဖြတ်တောက် ခေါင်းပုံဖြတ်မှုများရှိနေပြီး ထိုကိစ္စများကို မကျေနပ်၍ သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်ကြားခဲ့သည့်အလုပ်သမား ၁၀၀ ၀န်းကျင်ကို အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း ကိုဝင်းအောင် က ဆိုသည်။
ယင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်များ၌လုပ်ကိုင်နေသောဒေသခံအလုပ်သမားတချို့၏အဆိုအရ၎င်းတို့သည် မနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ အထိအလုပ်လုပ်ကြရပြီးတနေ့လုပ်အားခမှာကျပ်၁၅၀၀ မှ ၂၅၀၀ သာ ရရှိကြောင်း၊ အလုပ်သမား တဦး အတွက် တရားဝင်လုပ်အားခကို ကျပ် ၅၀၀၀ ဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ဒေသ အာဏာပိုင်များနှင့်ကြီးကြပ်သူ မြန်မာနိုင်ငံ သားများက ခေါင်းပုံဖြတ်သည်ဟု သိရသည်။
Posted by justfreeman at 16:360comments
Posted by justfreeman at 16:120comments
Posted by justfreeman at 14:400comments